नेपाल र बेलायतबीच चिसिएको सम्वन्ध सुधार्दै ह्यारी | abc.com.np
Posted by abc staff.2years,6months ago. ( Comments )
उनको नेपाल यात्रालाई नेपाल र बेलायतबीच विग्रिएको सम्वन्ध सुधार्न महत्वपूर्ण कडी सावित भएको छ । साथै ह्यारीको नेपाल भ्रमणले नेपालको पर्यटन विकासमा समेत सुधार आउने पर्यटन व्यवसायीले आशा गरेका छन् । त्यसैले उनको नेपाल भ्रमणलाई विशेष महत्वका साथ हेरिएको छ । युवराज ह्यारीको ५ दिने नेपाल भ्रमणबारे थुप्रै चर्चा परिचर्चा पनि भए । उनको नेपाल बसाईं लम्बिएपछि झन उनी चर्चाको केन्द्रविन्दु बनेका छन् । नेपालका प्रमुख सञ्चारमाध्याममा उनको नेपाल भ्रमणबारे प्रमुख खबर पनि बने । नेपाल र बेलायतबीच रहेको २ सय बर्ष पुरानो मित्रताले पनि खुबै चर्चा पायो । तर गत बैशाख १२ गते नेपालमा आएको महाभूकम्पमा उद्धार गर्न त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा कैयन मुलुकका विमान र हेलिकप्टर राहत लिएर आए । दुई दर्जन भन्दा धेरै मुलुकका सेना उद्धार र राहतमा सहभागी बने । ब्रिटिश गोर्खाहरुलाई लिएर आएको बेलायती सेनाको जहाज र डीएफआइडीको राहत सामग्री बोकर नेपाल आएको जहाजले पनि नेपाल छिर्ने अनुमति पायो । तर नेपालसँग सबैभन्दा पुरानो कुटनीतिक सम्बन्ध भएको बेलायतका अत्याधुनिक तीन चिनुक सैनिक हेलिकप्टर भने नेपाल छिर्न पाएनन् । कैयन कुटनीतिक र अन्य पहल गर्दा पनि बेलायतले ती जहाज नेपाल ल्याउन सकेन् । चिनुक हेलिकप्टरलाई नेपाल आउन किन दिइएन ? जबकी भूकम्प गएपछि नेपाललाई ठूलो राहत घोषणा गर्ने मुलुक बेलायत पनि एक थियो । बेलायतले नेपाली सेनाका कर्नेल लामालाई पक्राउ गरी कूटनीतिक च्यानलमार्फत रिहाईको माग गर्दा बेलायतले अटेर गरेपछि त्यसको बदला लिन नेपाल सरकार र नेपाली सेनाले बेलायती अध्याधुनिक तीन चिनुक सैनिक हेलिकप्टर नेपाल छिर्न अनुमति दिएन । २ सय बर्ष पुरानो सम्वन्धलाई वास्ता नगरी गरिएको कदम र अपरिपक्व निर्णयबाट बदला लिने हिसावले नेपाल सरकार र नेपाली सेनाको निर्णयले दुवै मुलुकको सम्वन्धमा थप दरार उत्पन्न भयो । गैरसैनिकलाई सेनाको ब्यारेकमा गैरन्यायिक थुनुवा र यातना दिएको आरोपमा अन्तर्रार्िष्ट्रय क्षेत्राधिकार आकर्षित हुने कानुन अन्तर्गत बेलायती अदालतको आदेशमा कर्णेल लामालाई लण्डनमा पक्राउ गरिएको थियो । कर्णेल लामालाई बेलायतमै नजरबन्दमा राखिएको थियो । नेपाली सेना र सरकारको कयैन पहलका बाबजुद कर्णेल लामा जेलमुक्त हुन सकेनन् । बेलायती सरकारले अदालतको मामला भएको भन्दै लामाको मुद्दा उसको क्षेत्राधिकार भन्दा बाहिर रहेको जवाफ दिएपछि नेपाल सरकार बदला लिने दाउको खोजीमा थियो ।
नेपाली सेनाले लामा थुनिएको बदला लिने सुनौंलो अवसरका रुपमा बैशाख १२ गते गएको महाभूकम्पपछिको अबस्थालाई नगद गर्‍यो । उद्धार गर्न आएको सैनिक हेलिकप्टर र बेलायती सेनालाई नेपाल प्रवेश गर्न रोक लगाएर नेपालले बेलायतसँग नराम्रो बदला लियो । यतिसम्म कि चिनुकलाई नेपाल आउन नदिन प्रधानसेनापति गौरवसमशेर राणा नै खुलेर लागेको आरोप लाग्यो । राणालाई भेट्न खोज्दा समेत बेलायती कार्यवाहक राजदूतले समय पाएनन् । उनको त्यो सबैभन्दा ठूलो कूटनीतिक असफलता थियो । जबकी प्रधानसेनापति राणा अमेरिकी राजदूत पिटर बोडेलाई सँगै लिएर प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला निवास पुगेका थिए । कोइरालालाई बोडेले त्यहीँबाट अमेरिकी राष्ट्रपति बाराक ओवामासँग पनि कुरा गराए । अमेरिकाले त्यसपछि मात्र उद्धार र राहत सामाग्री उसको सेनासहित नेपाल पठाएको थियो । उता भारतको चण्डीगढमा रहेका ती हेलिकप्टर नेपाल छिराउन बेलायती प्रधानमन्त्री डेभिड क्यामरुनले निकै प्रयास गरे । क्यामरुन पनि असफल बने । बेलायतका लागि यो भन्दा ठूलो बदला कुनै पनि हुन सक्दैनन् । उता नेपाल सरकारले भने क्यामरुनलाई ब्रिटिश सहयोगका लागि धन्यवाद दिँदै मुलुक उद्धार र राहतबाट पुर्ननिर्माणको चरणमा प्रवेश गरिसकेको बताउँदै चिनुक हेलिकप्टर नेपाल आउन आवश्यक नरहेको जनाउ दियो । प्राकृतिक प्रकोपमा सहयोग गर्नु संसारभरीका सेनाका लागि गौरव र प्रतिष्ठाको विषय हुने गरेको छ । तर कर्णेल लामाको रिहाईको माग गर्दा नगरेपछि बेलायत र नेपालबीच विग्रिएको सम्वन्ध विपतका बेला समेत असरका रुपमा देखा पर्‍यो । जसका कारण बेलायती सैनिक मात्र नेपालको विपतमा उद्धार गर्नबाट चुक्यो । त्यसपछि पनि नेपाल र बेलायतको सम्वन्धमा दरार पैदा भइनै रर्‍यो । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको बेलायत भ्रमणताका निकालिएको संयुक्त विज्ञप्तिमा नेपालको संविधान सुधार्नु पर्ने आसयको धारणा बेलायतले फेरि प्रस्तुत गर्‍यो भने भारतीय अघोषित नाकाबन्दीलाई उसले मौन समर्थन गर्‍यो । अहिले बेलायत र नेपालबीच एक किसिमको एकले अर्कालाई बदला लिने खेल चलिरहेको छ । यसकारण पनि दुवै मुलुकबीच विग्रिएको सम्वन्ध सुधार्न राजकुमार ह्यारीको नेपाल भ्रमण महत्वपूर्ण हुने विश्वास लिइएको हो । नेपालले यसलाई अवसरका रुपमा लिनुपर्छ । उता सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा विदुर कुँवर लेख्छन्–‘आफ्नै मुलुकको राजालाई बनबास पठाएर खैरे देशको एउटा ‘प्ले ब्वाई’ आउदा राजकीयसम्मान दिन्छौं नालायक सरकार π बरु हाम्रा कर्नेल कुमार लामालाई किन नेपाल आउन नदिएको, मोदीसँग मिलेर नेपालबिरुद्ध किन साँठगाँठ गरेको ? अनि बेलायतमा कार्यरत गोर्खा सैनिकमाथि किन भेद्भाब गरेको भन्ने प्रश्न सोधेर ह्यारीलाई र्‍याखर्‍याख्ती पार ।’
कर्णेल लामालाई बेलायतको महानगरीय प्रहरी अन्तर्गतको टेरोरिज्म कमाण्डले युद्ध अपराध तथा गम्भीर प्रकृतिका मानवअधिकार उल्लंघन आरोपमा पक्राउ गरेको थियो । यो घटनालाई नेपाल सरकारले गम्भिर रुपमा लिएको छ । नेपालमा भएको सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा पक्राउ परेका व्यक्तिलाई यातना दिएको उजुरीका आधारमा लामालाई बेलायती प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो । पक्राउपछि तत्कालिन परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले कडारुपमा आपत्ति जनाएका थिए । सुडानस्थित राष्ट्रसंघीय मिसनमा तैनाथ ४६ वर्षे कर्णेल लामा बेलायतस्थित आफ्नो पत्नीलाई भेट्न बेलायत गएको बेला पक्राउ परेका हुन् ।